Barbaadi & Bakkabuusi - LibreOffice Help
Barruu dhangiiwwan galmee ammee keessaa barbaada ykn bakkabuusa
4 When in Calc: Man'eewwan HendaaJechoota hundumaa qofa
6 Himannoo Idilee
7 Walsima qubee
8 Filannoo ammee qofa
9 Haalatoota barbaachaaf / Haalato Dabalate
10 Walfakkaatina Barbaadi
10.1 Yabbina arfiitiin walsima(afaanotani Eshiyaa qofa yoo danda'an)
10.2 Sagaloota akka(Jappan) (afaanota Eshiiyaa qofa yoo danda'an)
10.3 Mara barbaadi
10.5 Mara Bakkabuusa
10.7 When in Writer: Amala
10.8 When in Writer: Dhangii
10.9 When in Writer: Dhangii Miti
10.10 When in Calc: Barbaadi keessatti
10.11 When in Calc: Foormulaa
10.12 When in Calc: Gatiiwwan
10.13 When in Calc: Yaadannoowwan
10.14 When in Calc: Kallatti barbaachaa
10.15 When in Calc: Tarreewwanin
10.16 When in Calc: Sarjaawwaniin
10.17 When in Calc: Dabalata
10.18 When in Calc: Wardiilee mara keessa barbaadi
Barruu barbaaduu barbaadde ykn tarree irraa barbaacha duraan filtu galchi.
When in Calc: Man'eewwan HendaaJechoota hundumaa qofa
Jechoota hundaa ykn man'eewwan barruu barbaadidhaan walfakkaatan barbaada.
Qubannoo qaree ammee jalqabuuni fi duubatti deemuudhaan gara ka'uumsa faayilii itti barbaadi.
Barbaacha kee keessatti turbaa abbalaa akkaa fayyadamtu si'iif haayyama.
Arfiilee qubee guddaa fi qubee xixqqaa gidduu adda baasa.
Filannoo ammee qofa
Barruu ykn man'eewwan filataman qofa barbaada.
Haalatoota barbaachaaf / Haalato Dabalate
Barruu dhaanga'e akkaataa waliin ifteessite barbaada. Sanduuqa filannoo kana filiiti, ittaansuudhaan akkaataa tarree barbaada irraa fili. Akkaataa bakka buusa ifteessuf, Akkaataa tarreeBakka buusii irraa fili.
Amaloota wanta barbaaduu erga filatee booda Haalatni Barbaadii Sanduuqa bal'ina LibreOffice Writer Dirqaalawwan keessaa kana qaaqa Barbaadi $ Bakkabuusi Haaalata Dabalachuutti jijjira.
Barruu amalooni kan dhaangessuu kaallatti fi haalattaan qindaa'aina fayyadamuu yoo barbaadde sanduuqa Haalata Dabalat fili.
Jechoota kanneen barruudhaaf barbaacha walfakaatu barbaadi. Sanduuqa filannoo kana fili ittaansuudhaan dirqaalawwan walfakkaatinaa hiikuuf, qabduu... cuqaasi.
Taatee barruu ykn dhangii ati galmee keessa barbaaddu barbaada,fila.
Taatee barruu mara ykn dhangii bakka buusuu barbaade bakka buusa.When in Impress: Ajaja kan hanga bakka buutonni marrii islaayidii kee irratti taasifamutti irra deebi'i.
When in Writer: Amala
When in Writer: Amaloota barruu kan barbaaadduf barbaaddee fili. Fakkeenyaaf, yoo amalaf barbaaaddu, miseensoota barruu mara kan kallattiidhaan amala bocquu lakk addaa qabu, fi barruu mara bakka haalalata amala Bocaquu jijjiirnutu argamu.
When in Writer: Dhangii
When in Writer: Amaloota barruu dhangii ifteessii kanneen akka akaakuuwwan bocaquu, galteewwan bocaquu fi arfilee yaa'insa barruu barbaada.
When in Writer: Dhangii Miti
When in Writer: Barbaacha ykn sanduuqa Bakkabuusuu keessatti cuqaasi,iratti hundaa'uudhaan ulaaga barbaaduu haaquuf qabduu kana cuqaasi.
Ulaagaan barbaadii amaloota dhaangssuu Barbaadi jalatti ykn sanduuqa Bakkabuusuun agarsiifameera.
When in Calc: Barbaadi keessatti
When in Calc: Foormulaa
When in Calc: Gatiiwwan
When in Calc: Arfilee gatiiwwan keessatti ifteessituu fi bu'aawwan foormulaa keessattif barbaada.
When in Calc: Yaadannoowwan
When in Calc: Arfilee yaadannoowwan kan man'eewwanitti miilta'an keessatti ifteessituu barbaadaf.
When in Calc: Kallatti barbaachaa
When in Calc: Dabaree man'eewwani barbaaaduudhaaf murteessa.
When in Calc: Tarreewwanin
When in Calc: Sarjaawwaniin
When in Calc: Olii gara gadiitti sarjaawwan keessa irraa barbaada.
When in Calc: Dabalata
When in Calc: Wardiilee mara keessa barbaadi
When in Calc: Wardiilee mara keessaan kan faayilii wardii ammee keessaa fila.
Erga qaaqa Bakkabuusi $ Barbaadii cufteen booda, hanga ammaatti ulaagaa barbaacha dhuumaa galchite fayyadamuudhaan barbaaduu ni dandeessa, Jijjiirraa+Too'annoo+F dhiibuudhaan.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.4/Common/Find_and_Replace/om&oldid=1040486"
This page was last edited 02:24:27, 2015-04-27 by LibreOffice Help user WikiSysop.